Igumbi elilodwa e-Lyon Croix Rousse FR - I-Airbnb
Igumbi elilodwa e-Lyon Croix Rousse FR
760 okushiwo abanye
Lyon, Rhône-Alpes, i-France
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Catherine
Efulethini elivamile lama-canuts enhliziyweni ye-Croix Rousse, ngemuva kwemakethe, eduze kwendlela ehamba ngaphansi kanye nebhasi, igumbi labantu abangu-2 lilindile, ukwamukela, ukucaca, ukuzola, elisendaweni efanelekile yokuhlola i-Lyon ngokuzethemba.
Emgwaqweni othule, ohambisana ne-Boulevard de la Croix Rousse, kuhle.
Zonke izitolo ziseduze.
Kuhle ukujabulela okuhamba phambili koMkhosi Wezibani. Bobabili basondele ukuthi bangaphuthelwa lutho futhi yonke into phezulu ukuze balale ngokuzola
4.84 out of 5 stars from 760 reviews
4.84 · 760 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-760
Indawo yeCroix Rousse eqhwakele egqumeni eliphakathi kweRhône neSaône ifana nedolobhana elimaphakathi neLyon. Lapha silapha uCroix Roussien ngaphambi kokuthi sibe yiLyonnais. Sithanda ubungane, izitolo ezincane, imakethe yabalimi njalo ekuseni ( ngaphandle kwangoMsombuluko ), izingadi ezincane, izihlahla ze-boulevard futhi ikakhulukazi ukusebenziseka kwayo.
Ngihlala kuleli fulethi futhi ngizoba khona ukuze ngamukele futhi ngazise abahambi. Ngizoba lapho ngesidlo sasekuseni futhi ngihlale ngitholakala uma kudingeka. Bayoba nolwazi olumayelana nemicimbi yamasiko yangaleso sikhathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lyon namaphethelo